Hanao ahoana ny Samsung Galaxy s6? | Androidsis
Samsung tsy mandeha tsara. Ny orinasa Koreana izay nanjakazaka teo amin'ny tsenan'ny telefaona tamin'ny totohondry vy no mahita fa ny mpanamboatra sinoa dia mangalatra mofomamy lehibe kokoa isan'andro nozaraina tamin'i Apple hatramin'ny vao tsy ela izay.
Samsung dia nanaiky very 7,7% amin'ity fizarana tsena ity- tarehimarika nanery ilay mpanamboatra monina any Seoul handray andraikitra maika. ny Galaxy S5 dia fahombiazana lehibe ary mikasa hamerina hamerina ny tenany amin'ny mpandimby azy ilay goavambe Koreana: amin'ny anarana hoe Project Zero, ny Samsung Galaxy S6 dia natao hamelomana indray ilay toe-javatra nokapohina avy amin'ny fizarana finday an'ny Samsung. Hahomby ve izany? Miankina amin'ny fomba anaovan'i Samsung zavatra izany.
1 Handresy ny mpijery very ve ny Samsung Galaxy S6?
2 Mila ny Samsung Galaxy S6 ianao mba hanaitra anay
Handresy ny mpijery very ve ny Samsung Galaxy S6?
Ny mpampiasa Android dia manana fahasamihafana lehibe amin'ny client Apple; Raha diso fanantenana antsika ny mpanamboatra iray, dia tsy misalasala izahay mitady safidy hafa. Na dia marina aza fa misy ny mpanjifa Apple izay niafara tamin'ny fandehanana tany amin'ny Android, raha ny momba ny mpampiasa ny rafi-piasana Google dia manana fanatisme be lavitra kokoa noho ireo izay mampiasa ny vokatra avy amin'ny orinasa miorina amin'ny Cupertino izahay. Ary izany a olana ho an'i Samsung.
Miaraka amin'ny Samsung Galaxy S, ny mpanamboatra Koreana dia nanisy marika teo aloha sy teo an-tsena tamin'ny alàlan'ny fanolorana terminal mahery misy famolavolana tena manintona. Ary ny mpandimby azy, ny Samsung Galaxy S2 nohajaina, dia ary iray amin'ireo terminal farany tsara indrindra novokarin'ilay goavambe Koreana hatramin'izay.
fa tsy afaka miaina mandrakizay amin'ny voninahitra taloha ianao. Izay mpampiasa mahira-tsaina farafahakeliny dia mahalala fa ny sainan'ny mpanamboatra lehibe dia hanana toetra ara-teknika manandratra azy eo an-tampon'ilay faritra. Ary na dia teo aza ny fisian'ilay logo Samsung nipoitra tany ho any dia efa ampy izany, ankehitriny dia tsy mandeha toy izany ny raharaha.
Mila ny Samsung Galaxy S6 ianao mba hanaitra anay
Inona no fampiasana fandaniana 699 euro amin'ny Samsung Galaxy S5, raha ho an'ny 200 euro latsaka dia manana LG G3 manana ny mampiavaka azy sy ny vaovao maro hafa aho? Fa maninona aho no hampiasa vola be amin'ny sainan'ny andiana Galaxy S mpamokatra Koreana raha toa ka 350 euro manana terminal aho izay saika mahasoa aza?
Samsung dia mila mamerina mamorona ny tenany raha te-hamerina ny vahoaka very. Mila mamela anay hanana vava misokatra indray ianao miaraka amin'ny Samsung Galaxy S6 vaovao. Efa fantatsika fa amin'ny lafiny teknika dia biby izy io. Fa ny antonony mpampiasa dia maniry bebe kokoa, maniry fanavaozana. Ary toa nihaino antsika ihany i Samsung tamin'ny farany.
Ny mpiasa iray voalaza fa Samsung dia nanambara tao amin'ny tambajotra Reddit fa ny orinasany dia mandinika endrika isan-karazany ho an'ny flagship manaraka. Nanamafy koa fa manisy vidiny lehibe ny fanolorana Samsung kinova misy sisiny miolaka, toy ny Note Edge, na amin'ny lafiny roa miaraka amin'ny efijery miolaka.
Voalaza ao fa sary izay voasivana dia prototype Ary rehefa nanatrika ny fianarany taranja herinandro nialoha ny famoahana ny Galaxy S5 izy dia nanana modely niaraka tamin'ny efijery 5.2-inch. Midika izany fa afaka manova haingana be i Samsung.
Fa ny efa navoitran'ity mpiasa ity dia amin'ity indray mitoraka ity Samsung dia tsy mifantoka amin'ny endri-javatra amin'ny Samsung Galaxy S6 fotsiny. Fantatsika izao fa ny mpanamboatra miasa amin'ny kinova Touchwiz vaovao ianao, miaraka amin'i fanavaozana ny Android 5.0 L Ny terminal Samsung dia tsy miadana loatra amin'ny interface user izay ampidirin'ny mpanamboatra ao amin'ny fitaovany.
Eo amin'ny làlana marina izahay fa mila bebe kokoa. Izahay dia mila famolavolana vaovao, fa tsy hamboaran'ireo teo alohany. Tsy misy 50 Samsung Galaxy S6 refried, Raha mandoa isika, dia mendrika ny hanaingoana azy. Ary raha te hampiseho izy ireo fa terminal premium io dia mampiasa fitaovana premium ho an'ny fananganana ilay fitaovana.
Ny famaranana ny Samsung Galaxy Note 4 dia tena tsara ary samy mampiasa polycarbonate sy aluminium. Tianay ny terminal Samsung Galaxy S6 ho terminal tsara kalitao, tsy hoe toa finday kilalao akory ny mikasika azy.
Ary aza adino ny singa ao aminy. Tianay, ohatra, ny mpamaky rantsan-tànana, tsy ambany noho ny an'ny mpanamboatra sinoa izany, ahoana ilay ampiasain'ny Meizu MX4 Pro. Ary io iray amin'ireo zavatra vitsivitsy nahazo ny S5 tsara io, toy ny fanamarinana IP67, mifikitra amin'ny Samsung Galaxy S6.
Inona araka ny eritreritrao no mila ovaina i Samsung? Misy fanovana hafa hitanao fa ilaina amin'ny Samsung Galaxy S6?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia mila mamerina mamorona ny tenany indray, ny Samsung Galaxy s6 ve hanisy marika a mialoha sy aorian'ny?
Dadatoa dia hoy izy:
Tiako ny hamolavola holograms eo amin'ny latabako sy hamoritra azy mba hiditra ao am-paosiko ary rehefa mila izany aho dia afaka manokatra azy ary manana efijery mahavariana.
Mamaly an'i Untio
Untio mampihomehy dia hoy izy:
Hahahahahahahahahahahaha manome fanaintainana sy fihomehezana ianao untio
Mamaly an'i Chistoso untio
twotios dia hoy izy:
Tiako izy handraho sakafo sy hanadio ny tranoko
Mamaly an'i dostios
Hanolotra maodelin'ny andian-tsariny Zenfone miaraka amina zoom optika ve i ASUS?